theZOMI: [mrsorcerer:37604] Fwd: [လူဗိုလ်ဟူသည် ...] ဗဟုသုတ-၁
[mrsorcerer:37604] Fwd: [လူဗိုလ်ဟူသည် ...] ဗဟုသုတ-၁
Subject: [လူဗိုလ်ဟူသည် ...] ဗဟုသုတ-၁
Soe Gyi and ရွှေအိမ်စည်စာကြည့်တိုက် - စာပေဒါနပြုသည် shared Shwe Eaim Si's photo.
သန်းခေါင်ယံမှာ နေသာတဲ့ အရပ် ဘယ်မှာရှိသလဲ....?
"လက်ပလန် "ဟာ အဓိကအားဖြင့် (ကမ္ဘာမြောက်ဘက်စွန်းအရပ်)အာတိတ် စက်ဝိုင်း အရပ်ဒေသ အတွင်းမှာရှိပါတယ် ၊ နော်ဝေမြောက်ပိုင်း ၊ ဆွီဒင် နဲ့ဖင်လန်နိုင်ငံ တို့ထိ ဖြန့်ကျက်တည်ရှိပါတယ်။ အဲဒီနေရာဟာ သန်းခေါင်ယံ နေမင်းတွန်းလင်းတဲ့ နေရာတွေ ပေါ့။ တစ်နေ့မှာ 24 နာရီလုံးလုံး အဆက်မပြတ် နေသာတယ်လေ၊ မေလလယ်ကနေ ဇူလိုင် လကုန် အထိ (73) လုံးလုံး ပေါ့။
ဘာကြောင့် ပင်လယ်ရေ ငန်သလဲ....?
ဆားဆိုတာ ဓာတ်သတ္တု တစ်မျိူး ဖြစ်ပါတယ်။ ကျောက်ဆောင် တွေကို မိုးရေ တွေက တဖြည်းဖြည်းချင်းတိုက်စားတော့ ( အမူန့်လေးတွေ ဖြစ်ပြီး )မိုးရေနဲ့အတူ ပင်လယ်ထဲကိုစီးဆင်းသွားပါတယ်။ ပင်လယ်ရေကို ငန်စေပါတယ်။ ပင်လယ်ရေ အငွေ့ပျံတဲ့ အခါ ဆားက အငွေ့မပျံပဲ ကျန်ခဲ့ပါတယ်။
ပင်လယ်နီ ဟာ နီသလား.... ?
ရေပြင်ကို အနီရောင်ဖြစ်အောင် လုပ်ပေးနီုင်တဲ့ "အယ်လ်ဂျီ" တွေကြောင့် ၊ "ပင်လယ်နီ " ဆိုတဲ့ အမည်ကို ရတာဖြစ်ပါတယ်၊ဒီအပြောမကျယ်လှတဲ့ ကုန်းတွင်းပိုင်း ပင်လယ်ဟာ အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာရဲ့ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ အရှေ.မြောက်အာဖရိက နဲ့ အာရပ်ကျွန်းဆွယ်ရဲ့ ကြားမှာတည်ရှိပါတယ် ။
ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်အောက် 369-မီတာ၊ (၁၂၉၉) ပေမှာရှိတဲ့ အစ္စရေးနဲ့ ဂျော်ဒန်နယ်ခြားက ရေအိုင်ကြီး ဖြစ်ပါတယ်၊ အဲဒီအထဲက ရေတွေဟာ ရိုးရိုးပင်လယ်ဆားငန် ရေထက် ခုနစ်ဆ ပိုငန်ပါတယ်၊ ဘယ်လိုငါးမျိူးမှ အဲဒီရေထဲမှာ မနေနိုင်ကြပါဘူး၊ ရေကူးတဲ့ လူတွေလည်း ရေထဲကိုနစ်မသွားပဲ ရေပေါ်မှာပေါလောပေါ်နေပါတယ်။
ဖယောင်းတိုင် ဘာကြောင့် မီးတောက်လောင်သလဲ..?
ဖယောင်းတိုင်ရဲ့ မီးစာကို မီးညှိလိုက်တဲ့ အခါ၊ အပူရှိန်က ဖယောင်းကို အရည်ပျော်စေတယ် ၊ အရည်ပျော်သွားတဲ့ ဖယောင်းတွေက မီးစာရှိတဲ့ဆီကို တဖြည်းဖြည်းချင်း ရွေ.လျားစီးဝင်လာပါတယ်၊ အဲဒီဖယောင်းအရည်တွေက ဖယောင်းတိုင်ရဲ့ မီးတောက်ကလေးနဲ့ တွေ့တဲ့အခါ၊ ဖယောင်းအငွေ့ဖြစ်သွားပါတယ်။ အဲဒီဖယောင်းအငွေ့က လေထဲမှာတဲ့ အောက်ဆီဂျင်နဲ့ ရောနှောပြီး ဖယောင်းတိုင်မီးလေးအဖြစ် တောက်လောင် ပါတယ်။
Posted By Blogger to လူဗိုလ်ဟူသည် ... at 3/18/2013 01:27:00 PM